Alina an-dranomasina alohan'ny fitsangantsanganana miaraka amin'i Michael Moore: i Jeremiasad no Wont-ny
Home » Lahatsoratra farany farany » People » Alina an-dranomasina alohan'ny fitsangantsanganana miaraka amin'i Michael Moore: i Jeremiasad no Wont-ny
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Cruising • Kolontsaina • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Oktobra 7, 2017
Tiako ny hiseho andro vitsivitsy alohan'ny fotoana handehanana mitsangantsangana, ary nanomboka ny Halloween's Disney tamin'ny dia lavitra nivezivezy tao amin'ny Manhattan Terminal, dia nanana fotoana mety tsara aho nankafizako telo andro ny seho Broadway alohan'ny niandohan'ny Disney Magic. Seho efatra no nofidiko, tena samy hafa be daholo. Ny safidy voalohany nataoko Broadway dia Michael Moore: The Terms of My Surrender. Nahaliana ahy ny lohateny; Michael Moore dia tsy karazan'olona tokony hitolo-batana na amin'iza na amin'iza toe-javatra misy.
Nihaona tamin'io lehilahy malaza angano io aho taloha vitsivitsy; mora idirana any Michigan izy, ary miezaka ny tsy hiseho ho tsy mitokantokana na ambonin'ny vahoaka. Mpandahateny mahery izy, ka te-handre ny voahangy fahendrena misy ny seho Broadway-ny.
Mahagaga i Moore tamin'ity fampisehoana ity; momba ny fiainany sy ny zavatra inoany indrindra ny ankamaroany. Tsy dia mahatsikaritra hatsikana firy ireo mpanao hatsikana, fa nitolo-batana tamin'ny monologue marani-tsaina an'i Moore aho, narahin'ny fihomehezana feno hetahetan'ny mpanatrika. Ny karazany vazivazy dia be pitsiny sy manam-pahaizana; nanolotra ny seho nataony ho programa 12-dingana ho an'ny liberaly izy. Tsy liberaly aho na mpisotro toaka, ka ny fizotran'ilay fizarana 12-dingana dia fanandramana vaovao. Iray amin'ireo dingana nentim-paharazana ao anatin'izany fandaharana izany ny famadihana ny olan'ny tena amin'Andriamanitra. Niaiky i Moore hoe: "Ny fahefana lehibe ananako dia i Ruth Bader Ginsburg."
Nikiakiaka i Moore hoe: “Ahoana no nahatonga an'io? Indray mandeha monja tao anatin'ny 30 taona no nandrombahan'ny Repoblikana ny latsa-bato malaza. ” Vinavina eo an-tsehatra an-tsehatra ny sary goavam-be iray tsy mitongilana an'i Donald Trump - toa ny efa noterena nandritra ny herinandro ilay mpanapitrisa. Tao amin'ny kianja filalaovana dia nisy fanasana malalaka ho an'Andriamatoa Trump hanatrika ny seho amin'ny fialamboliny. Ny ampahany amin'ny fanasana dia tamin'ny teny rosiana, mazava ho azy. Misy fiovana 15 napetraka amin'ny dingana 12 mankany amin'ny fahazavana, miaraka amin'ny sary sahisahy sy tsy dia mazava loatra. Ny vinavina iray dia ny sainam-pirenena amerikanina iray minus ny mena; tsy nila famakafakana firy vao hahalala an'io subliminaly io. Nilaza i Moore fa nandresy i Trump satria nahay nanodikodina ny fotsy hoditra i The Donald. Nilaza izy fa ny 64% -n'ireo bandy fotsy dia nifidy ny filoham-pirenentsika, saingy Moore dia nanolotra antony roa tsy tokony avelantsika Trump roa maharitra.
Nahaliana ahy ny tantaram-piainan'i Moore. Niresaka momba ny fanoratana taratasim-pananganana tao amin'ny Fanjakan'ny Zazalahy izy tamin'ny fahazazany; tokony ho momba an'i Abraham Lincoln izany, ary ny fifaninanana dia notohanan'ny Elks 'Club. Nohararaotiny ny fotoana hanomboana ny Elks 'Club ho an'ny politikan'ny mpikambana fotsy ihany. Ny reniko dia mpiasa tao amin'ny Elks 'Club nandritra izany fotoana izany, ary tsy hitako mihitsy hoe fotsy ihany io ao anatin'ny rindriny tsy tafiditra. Amin'ny maha-Anglo-Scandinavian ahy dia nihevitra fotsiny aho fa tsy liana amin'ny mpikambana ny hafa. Ireo raim-pianakaviana telo teo amin'ny fiainako dia mpanavakava-bolon-koditra avokoa, ka tsy mbola nisy tratran'iza na iza tamin'izaho fa WASPS fotsy fotsy. Katolika ny reniko, saingy nandao ny finoana taorian'ny fanambadiana tamina mpanohitra iray.
Notsiahivin'i Moore fony tany amin'ny lise izy, nokapohan'ny talen-tsekoly indray andro tamin'ny fanafihana miverimberina in-dimy avy amina efatra, ho sazy noho ny tsy fametahana ny akanjony. Araka ny efa nolazaiko teo aloha, tsy olona malala-tanana aho, ary tsy avy amin'ny fianakaviana liberaly. Raha nanafika ahy ny talen-tsekoly iray, dia nipoitra tany am-pianarana niaraka tamin'ny basy ny reniko ary nanapoaka ny tavany mitsiky teo an-dohany. Izany no fomba nitantananay ireo zavatra tany amin'ny faritr'i Indiana mena mena izay nipoiran'ny oloko. Raha ny marina dia naka basy voatifitra ny zanak'olo-renin'i Neny ary notsofiny antsasaky ny vadiny taorian'ny nahitany azy nanao raharaha ratsy; mazàna avelantsika hiteny ny basy.
Saingy Moore dia tsy mitaky basy, ary nilaza tsara momba izany izy. Nanolotra ny fanafoanana ny fanitsiana faha-2 izy, nosoloin'ny fanitsiana faha-28 izay "nifehy tanteraka ny zon'ny vahoaka hitana sy hitondra am-bava fitaovam-piadiana tsy mandeha ho azy ho an'ny fanatanjahantena sy fihazana, mikasika ny zon'ny voalohany amin'ny olona rehetra. afaka amin'ny herisetra amin'ny basy; Tsy ho voahitsakitsaka izany. ” Maty mafy tamin'io izy. Ny fanadihadiana nataony tamin'ny Bowling ho an'ny Columbine tamin'ny 2002 dia nanameloka ny ratsy nataon'ny kolontsaina manome voninahitra ny basy. Ny sangan'asany dia heverina ho iray amin'ireo horonantsary fanadihadiana lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra. Niresaka tamim-pitiavana ny fanoherana ny herisetra tamin'ny basy izy ary nilaza mialoha fa mbola hisy ny fitifirana olona marobe any Etazonia. Sahala amin'ny hoe psychic izy; telo andro talohan'ny fitifirana faobe tany Las Vegas.
Noraisina ho toy ny zavatra ara-tsaina izy rehefa naminavina mialoha ny fifidianana ho an'i Trump. Tsy hoe tiany Trump, fa satria mino izy fa mamokatra olona "moana" i Amerika. Izy aza dia nanao fampisehoana quiz izay nanehoany ny fiakaran'ny kanadianina "adala" hanohitra ilay amerikana "hendry indrindra". Nangataka mpirotsaka an-tsitrapo avy any Kanada izy izay nanana IPA lalina dia ratsy hamaly ny fanontaniana amin'ny anaran'ny "vahiny". Nangataka ny Amerikanina manana IPA avo izy hifanandrina amin'izy ireo. Nangataka mpilatsaka an-tsitrapo isan-karazany izay nahazo straight A's tany amin'ny oniversite izy. Manana 4.0 tonga lafatra aho avy amin'ny oniversite telo sy oniversite roa, doctorat ary post-doctorat, saingy tsy mino aho fa afaka nahita ny tanako teny amin'ny habakabaka izy satria somary maizina ny faritra nisy ahy teo ambanin'ny lavarangana. Na izany aza, nifidy mpitsabo trauma sy injeniera izy hisolo tena ny Amerikanina, ary nanana isa izy ireo tamin'ny taona 3.9. Hainao? Nandresy tamin'ny lalao ny Kanadiana.
Tamin'ny iray tamin'ireo androny dia nanesoeso ireo lalàna izay mandrara ny entana sasany ao anaty fitondrana izy rehefa manidina ireo kaompaniam-barotra. Ohatra, voarara ny manangona mpamokatra omby. Manontany am-pahatsorana aho hoe iza no maka omby omby mandritra ny fialan-tsasatra, ankoatry ny dikantenin'i Hugh Hefner izay tena kinky? Moore dia nanana boaty fitoriana kely, avy teo no nisintomany ireo zavatra fady. Nampiasa illusions optika izy mba hampifalifaly, toa an'i Julie Andrews nisintona fonosana lava avy tao amin'ny satchel keliny tao Mary Poppins. Moore dia namoaka ravina goavambe goavambe, ary nandeha teny amin'ny lampihazo nanambara ny maha-hadalana ny fandrarana zavatra hafahafa toy izany. Nasehony ny toe-javatra mety tsy ampoizin'ny mpanjifa fiaramanidina mila mitsoka fako avy amin'ny gorodon'ny fiaramanidina mba hipetrahany. Notondroiny tamin'ireo mpiaro teatra ilay mpitsoka mba hampisehoana ny fahombiazan'ny fanesorana ireo fako Trump-vote. Rehefa nandeha teo amin'ny jiro izy dia nifona tamim-panajana tamin'ny mpiaro iray izay tsy hitany hoe: “Miala tsiny fa hadinoko ny nanapoaka anao, tompoko.”
Nilaza i Moore fa ny olona izay mbola manohana an'i Trump aorian'ny sivy volana nanjakany dia antony very, ary nangataka tamin'ireo mpiaro azy hifantoka amin'ny fandresen-dahatra ireo Amerikanina 90 tapitrisa izay tsy manana fironana politika hiangona amin'ny ankavia. Ireo olona toa ahy no noresahiny, izay sady tsy Repoblikana no Demokraty, izay tena tsy mijoro amin'ny lafiny roa amin'ny fefy. Vonona ny hihaino an'i Michael Moore toa an'i Bill O'Reilly ihany koa aho. Tsapako fa ny adihevitra nataon'i Moore dia voadinika tsara, fohy ary mendrika hodinihina. Azo antoka fa tsy mifanaraka amin'ny 100 isan-jaton'ny foto-pisainany aho, fa hihaino azy aho. Miahiahy aho fa vitsy ny olona mahazo mari-pahaizana momba ny lalàna, toa ahy, raha tsy afaka mihaino adihevitra avy amin'ny andaniny roa amin'ny olana izy ireo.
Ny ranomaso sasany tamin'ny seho dia nampitomany ahy, indrindra rehefa niresaka fanafihana an-tsokosoko ilay olona tsy maintsy natrehiny izy, sy ireo fandrahonana ho faty marobe azony. Niresaka momba ny mpifanandrina mahery setra namono azy tamin'ny antsy izy, ary lehilahy iray tratry ny zava-poatra niniana hapetraka ao ambanin'ny tranon'i Moore handringanana azy sy ny fianakaviany. Nitendry clip radio iray an'i Glenn Beck nandrahona ny hamono azy izy. Niahiahy aho fa na oviana na oviana, ny wacko elatra havanana dia mety hisarika an'i John Wilkes Booth eo aminy.
Amin'ny ankapobeny, sarotra ny nitelina ny fijoroany manohitra ny basy; Nilaza izy fa ny 77% amin'ny Amerikanina rehetra dia misafidy ny tsy hanana basy, noho izany ny lalàna momba ny basy dia tokony ovaina mba hanehoana ny fahatsapana maoderina. Tsy nanana basy koa ny jiosy tany Alemana Nazia, satria nalain'ny governemanta izy ireo. Ankehitriny, ahoana no nahatanterahan'izany?
Nisy fotoana nisy lehilahy nitondra badge tonga teny amin'ny lampihazo ary nametraka an'i Moore tamin'ny rojo vy. Tsy hitako izay hatao amin'ity. Ny lehibeko teo aloha, Fred Merle DeChausse, mpampiantrano ny fandaharana amin'ny fahitalavitra tariby "Polka Party" dia niasa indray andro raha tonga ny polisy Warren Michigan, nofatorana tànana, avy eo notaritariny ny borikiny. Nisy fisamborana tsy nampoizina toy izany koa tamin'ny vanim-potoana nazia, rehefa nofatoran'ny manampahefana tanana ny Jiosy, ny pelaka ary ny kilemaina - dia nentin'izy ireo, nendahina izy ireo ary nodorany tao anaty lafaoro. Ary mazava ho azy, (araka ny filazan'ny mpitari-dalana iray tao amin'ny Deutsches Stadion any Nürnberg) dia nilaza i Hitler fa be loatra ny volan'ny lasantsy.
Notantarain'i Moore indray ny fotoana nandehanany nankany Alemana hanohitra lanonana iray tany amin'ny fasana Nazia. Tonga niaraka tamin'ny sakaizany jiosy izy - izy roa dia nanana faneva fanoherana izay mivaky hoe "Novonoin'izy ireo ny fianakaviako." Moore sy ny namany dia nikasa ny hamoaka azy io amin'ny fotoana mahamety izany raha mandeha mivantana ireo fahitalavitra. Mampalahelo fa nosakanana imbetsaka tsy hiditra amin'ilay hetsika izy ireo, saingy namitaka ireo mpiambina tamin'ny alàlan'ny fifangaroana mangingina niaraka tamin'ireo mpitatitra fitaovana tamin'ny vaovao CBS. Ny hevitr'i Moore dia hoe "F ny lalàna, ataovy izay tokony hataonao."
Nanaitra ahy ny hafatr'i Moore. Mahay izy. Sahy izy. Matoky izy. Mandresy lahatra izy. Nahazo fihobiana sy tehaka mafy izy ary nahazo izany. Sahiran-tsaina aho, naheno tamin'ny mpiasan'ny orinasa iray ny fomba hidirana amin'ny varavarana miafina, miafina eo akaikin'ny miafina, efitra fandroana sembana, hihaona amin'ny kintana avy hatrany aorian'ny fampisehoana. Te hanana sary miaraka amin'i Moore aho; Efa nanana roa hafa aho tamin'ny taona lasa, fa ny iray vao haingana. Very 100 pounds aho hatramin'ny nahitako azy farany, ary hafa tanteraka ny fahitako azy. Amin'ny lafiny iray, manana distrophy hozatra aho ary mampiasa tongotra an-tongotra; Tsy mandrahona an'i Michael Moore aho amin'ny alàlan'ny eritreritra. Ary ny fahafantarako ny tantarany momba ny fanohanany ilay “bandy kely” dia nino aho fa hanery ny fangatahan'ny chap sembana iray izay te-haka sary ilay fotoana. Tonga namakivaky ilay làlana miafina aho, ary nanakaiky an'i Michael, saingy nisy lehilahy ratsy toetra, nanambara fa mpiambina ny vatany nanatona ahy ary nanomboka nanambany ahy satria niditra an-tsokosoko namaky ny varavarana voafetra hihaona amin'i Moore. Nananatra ahy izy fa tsy nahazo alalana mialoha, toy ny hoe nisy iray tamin'ireo mpiasan'ny teatra namela ahy hiditra. Nanaiky ny sary tamim-pifaliana i Moore fony izy teo akaikiko, ary nalaiko koa ny fakantsarin'ny mpaka sary ahy ary nitifitra sary koa izy. Nanopy ny masoko ilay mpiambina ny vatana ratsy izay nampita, tamin'ny fomba tsy mazava, ny lesona nataon'i Michael Moore: "F, tsy maintsy ataoko izay tokony hataoko."
Ankehitriny, ireo polisy izay nanosotra tànana an'i Moore dia nivadika ho ampahany tamin'ilay hetsika. Ireo lehilahy hunky ireo dia mpandihy hafakely misy hozatra goavambe sy be loatra …… umm, antso avo momba ny firaisana, mametaka ny entany fotsiny mba hanomezana antoka ny famaranana lehibe mampientanentana. Tsy nisy ahiahy i Michael Moore - tsy misy ahiahy ny amin'ny fanalan'ny Nazia ankehitriny azy. Fa raha sanatria ka misy manandrana dia notezaina tao Indiana mena aho - ary tianay ny fanitsiana faharoa.
NY FITENIN'NY MPANASA ANAO. Belasco Theatre, New York City. Fotoana fihazakazahana: 2 ora.
Araho i Anton Anderssen ao amin'ny twitter @Hartforth
Mifandraisa: Anton @ VoiceOfBroadway.com